Asa 4, Dikateny Iombonana Eto Madagasikara (DIEMDC) | The Bible App
Learn More About Dikateny Iombonana Eto Madagasikara
I Petera sy i Jôhany eo anatrehan’ny Fitsarana ambony
1Raha mbola niteny tamin’ny vahoaka teo i Petera sy i Jôhany, dia indreo tonga ny mpisorona#4.1 ny mpisorona: misy stf sasany ahitana hoe ny lohandoha-mpisorona. sy ny lehiben’ny mpiambina ny tempoly ary koa ny Tsadoseanina. 2Tsy zakan-dry zareo mihitsy ny ampianarin’izy roa lahy ny vahoaka sady itoriany fa tanteraka ao amin’ny tenan’i Jesoa ny fitsanganana velona avy any amin’ny maty. 3Nosamborin’izy ireo i Petera sy i Jôhany, ary satria efa hariva ny andro, dia nataony am-ponja mandra-paharainan’ny andro. 4Maro kosa tamin’izay nihaino ny tenin’Andriamanitra no nino, ka tafakatra ho dimy arivo ny isan’ny vatan-dehilahy mpino.
5Nony ampitson’iny vao nifamory tao Jerosalema ny manampahefana jiosy: dia ny loholona sy ny mpahay lalàna 6ary koa i Hanà mpisorombe sy i Kaiàfa, i Jôhany sy i Aleksandra mbamin’izay rehetra havan’ny mpisorombe. 7Nampanatrehan-dry zareo i Petera sy i Jôhany sady nanontaniany hoe:
–Fahefana ahoana moa na amin’ny anaran’iza no nanaovanareo izany fanaratsiana izany?
8Feno Fanahy Masina i Petera tamin’izay ka nanao hoe:
–Ry mpifehy ny vahoaka sy ry loholona, 9raha adinina izahay anio satria nanasoa lehilahy kilemaina anankiray ary anontaniana ny fomba nahasitranany, 10dia izao no aoka ho fantatrareo rehetra mbamin’ny vahoaka Israely manontolo: salama tsara io lehilahy manoloana anareo io noho ny anaran’i Jesoa Kristy avy any Nazareta, Izay nohomboanareo tamin’ny hazofijaliana kanefa natsangan’Andriamanitra ho velona avy any amin’ny maty. 11I Jesoa no Ilay voalazan’ny Soratra Masina hoe:
«Ny vato nolavinareo mpanao trano
no nanjary vato fehizoro#4.11 Sal 118.22.!»
12Ao aminy no hany ahazoam-pamonjena; eny, tsy misy eto ambanin’ny lanitra anarana hafa nomen’Andriamanitra ny olona, izay hahazoantsika famonjena!
13Gaga dia gaga ireo anisan’ny Fitsarana ambony raha nahita ny fahasahiana nasehon’i Petera sy i Jôhany: satria tandriny tokoa fa olona tsotra tsy nahita fianarana izy roa lahy, sady fantany fa olona niaraka tamin’i Jesoa; 14hitany koa ralehilahy sitrana soa aman-tsara nitsangana teo anilan’izy roa lahy, hany ka tsy nanan-kolazaina ry zareo.
15Dia nasaina niala teo amin’ny efitranon’ny Fitsarana ambony ireto voampanga fa ry zareo kosa nifampidinika 16nanao hoe:
–Inona no hataontsika amin’ireo lehilahy ireo? Ny mponina rehetra eto Jerosalema dia mahalala miharihary ny famantarana vitany ka tsy haintsika lavina. 17Kanefa mba tsy hielezan’izany intsony amin’ny vahoaka, dia aoka horahonantsika izy roa lahy ka hosakanana tsy hiteny amin’ny anaran’i Jesoa intsony na amin’iza na amin’iza.
18Dia nantsoin-dry zareo i Petera sy i Jôhany, ka norarany tsy hiteny na hampianatra amin’ny anaran’i Jesoa intsony. 19Saingy hoy izy roa lahy taminy:
–Tsarao raha rariny eo imason’Andriamanitra ny manaiky anareo toy izay manaiky an’Andriamanitra; 20raha izahay, tsy azonay atao ny tsy hiteny momba izay efa hitanay sy renay.
21Norahonan’ireto manampahefana indray i Petera sy i Jôhany vao nalefany. Tsy nahita izay hampiharana sazy ry zareo satria ny vahoaka efa samy nanome voninahitra an’Andriamanitra noho ny zava-nitranga teo. 22Fa mihoatra ny efapolo taona ralehilahy nanaovana izany famantarana nahasitrana azy izany.
Vavaka nataon’ny mpino
23Vantany vao afaka izy roa lahy, dia namonjy ireo namany ka nitantara izay rehetra voalazan’ny lohandoha-mpisorona sy ny loholona. 24Nony nandre izany ireo mpino, dia indray nientana nanandratra tonom-bavaka tamin’Andriamanitra hoe:
–Tompo ô, Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin’izay rehetra eo aminy#4.24 Jereo Eks 20.11; Sal 146.6.; 25ary tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina no nampitenenanao an’i Davida razanay sady mpanomponao hoe:
«Nahoana no mihotakotaka ny firenena?
Nahoana no mioko foana ny vahoaka?
26Nivonon-kiady ny mpanjakan’ny tany,
ary nivondrona ny manampahefana
mba hanohitra ny Tompo sy ilay Mesiany#4.26 Sal 2.1-2, voatsiahy araka ny dkt grika tranainy Septoazinta..»
27Marina tokoa fa i Herôda sy i Pônty Pilato, niaraka tamin’ny olona hafa firenena sy ny vahoaka israelita, dia nivondrona teto amin’ity tanàna ity mba hanohitra an’i Jesoa Mpanomponao masina, Izay natokanao ho Mesia#4.27 Jereo Lk 23.7-11; Mt 27.1-2; Is 61.1.. 28Notanterahin’izy ireo izay efa notendrenao rahateo tamin’ny herinao sy ny fikasanao. 29Tompo ô, hitanao ankehitriny ny fandrahonany, koa omeo anay mpanomponao ny hery hitoriana ny teninao amim-pahasahiana tokoa; 30ahinjiro ny tananao hahasitrana ary hahatontosa famantarana sy zava-mahagaga amin’ny anaran’i Jesoa ilay Mpanomponao masina.
31Rehefa avy nivavaka ireo mpino, dia nihovitrovitra ny trano niangonany ary feno Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’Andriamanitra tamim-pahasahiana.
Miombom-pananana ny mpino
32Iray fo sy fanahy tokoa ireo mpino marobe ary tsy nisy nilaza ny fananany ho azy samirery, fa niara-nanana ny zavatra rehetra#4.32 Ampit 2.44-45 sy nta.. 33Tamin-kery lehibe no nijoroan’ny apôstôly ho vavolombelona manambara fa nitsangana velona i Jesoa Tompo; ary fitahiam-be avy amin’Andriamanitra no teo amin’ny mpino rehetra. 34Tsy nisy orin-javatra teo aminy; fa ireo nanana tany na trano dia nivarotra izany, ary nitondra ny vola vidin’ny zavatra lafo, 35ka nanolotra izany teo anatrehan’ny apôstôly, dia nozaraina araka izay nilain’ny tsirairay. 36Ohatra i Jôsefa, levita teraka tany Sipra, izay nantsoin’ny apôstôly hoe Barnabà (izany hoe olona havanana amin’ny fampaherezana): 37i Jôsefa dia nanana saha izay namidiny, ka nanolotra ny vola vidiny teo anatrehan’ny apôstôly.
Explore Asa 4 by Verse